Dad loo soo xiray dilkii guddoomiyihii Xamar-Jajab | KEYDMEDIA ONLINE
Dad loo soo xiray dilkii guddoomiyihii Xamar-Jajab
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in dad loo soo qab-qabtay dilkii AUN guddoomiyihii degmada Xamar-Jajab oo xalay lagu dilay degaanka Sar-kuusta loo yaqaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen dad looga shakisan yahay in ay geysteen dilkii xalay xaafadda Sarkuusta ka dhacay ee lagu khaarajiyay Guddoomiyihii degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir.
Dilka AUN guddoomiyaha ayaa la isla dhex marayaa inuu dhacay kaddib markii guddoomiyuhu uu gurigiisa u raacay Mooto, halkaasna lagu khaarajiyay maadaama uusan ilaalo wadan, warar kale oo kaa da duwan ayaa waxa ay sheegayaan in koox hubeysan oo gurigiisa udhacday ay ku dileen guddoomiyaha, waxaana la xaqiijiyay in kooxdii dilka geysatay ay goobta isaga baxsadeen.
Laamaha ammaanku kama aysan hadlin sida uu u dhacay dilka balse waxay xaqiijiyeen geerida guddoomiyaha degamada Xamar Jajab iyagoo sidoo kale tilmaamay in ay dad usoo qab-qabteen dilka guddoomiyaha
“Xalay fiidkii ayaa Sar-kuus duleedka Muqdisho lagu dilay Maxamed Cabdi Xayle Guddoomiyihii Degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir. Ma aynaan cadeyn qaabka loo dilay guddoomiyaha, waxaa loo hayaa eedeysanayaal la rumeysanyahay in ay ku lug lahaayeen falkaas, baaristiisana waa socotaa" ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed.